Shiinaha Hexagon meertada adag ee baararka adag iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yunlingyu
Magaca badeecada Hexagon wareega wareega ee adag
wax Bir adag
50 * 50MM Kaarboonka birta ah
miisaanka miisaanka saafiga: 26kg
miisaanka gors: 27kg
midab madow / madow iyo oranji
kale dhumucda derbiga: 3mm
xamili jir dhexe: 710mm
3 dhexroor xamili: 25mm / 38mm / 50mm
Nidaamka galvanized, deegaanka oo aan dhadhamin, u adkaysiga miridhku iyo daxalka, oo ku qalabaysan taarikada baarkinka oo ah 50 mm aperture.
Aagga sii kordhaya iyo hoop-ka haynta ayaa isku jira, oo waara.
Super ganaax knurled xamili non-siibixan, samayn karaa awood fiican.
Goob jimicsi bartilmaameed: muruqyada brachialis Sidoo kale jimicsi brachioradialis brachialis mice muruqa.
Jimicsi muhiim ah
1. istaagida, cagaha garbaha - kala fogee, ku qabso xarig wareeg ah labada gacmood, kor u qaad miisaanka. Si dabiici ah ula soo bood barar jidhkaaga hortiisa, gacmaha korena waxay ku dhow yihiin dhinaca jidhka.
2. Hawo la waxyooday, si xoog leh kor ugu laallaada, kala-goynta brachialis ee biceps-ka dambe waa la dareemi karaa, barta ugu sarreysa ee foosha foosha, oo xajiso daqiiqad, ka dibna si tartiib ah u soo celi.
3. Ka dib markii lagu celiyo asalka, ku celi. Sababtoo ah brachialisku waa fiber muruq gaabis ah marka la barbar dhigo biceps, dhaqdhaqaaqa oo gaabis ah, ayaa ka sii fiican.
astaamaha ugu caansan, dadka badankiisuna way gartaan astaamahiisa. Waxay kaa caawin doontaa markaad si adag u jiido, yareyso culeyska saaran lafdhabarta, taasoo kugu qasbeysa inaad isticmaasho wax badan oo ka mid ah awoodaada hoose ee jirka si aad u dhameystirto ficilka.
Marka, tababarayaasha guud waxay bartaan jiido adag, ama waxaad si taxaddar leh u daawataa filim bandhig ah, mabda 'ahaan, barbarku kama foga meel aad uga fog jirka. Markaad u dhowdahay lugahaaga iyo kor iyo hoosba, ayaa ka sii fiican, inaad ilaaliso xarunta culeyska iyo yareynta halista dhaawaca dhabarka hoose
Hore: barxad barxad wareegsan
Xiga: Isku laabidda sagxadda jiingadda